Turkiga oo 20 qof oo Sacuudiga u dhashay dacwad ugu soo oogay dilkii Jamaal Khaashuqji - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka AFP/EPA
Image caption Sawirrada Madaxweynaha Turkiga Erdogan iyo weriye Jamaal Khaashuqji
18-ka qof ee kale ayaa lagu eedeeyay "inay si ula kac ah dilka ugu fuliyeen" gudaha qunsuliyadda Sacuudiga.
Sirdoonka reer Galbeedka ayaa aaminsan in dilkaas uu amar ku bixiyay dhaxal-sugaha borotooyada Sacuudiga Maxamed Bin Salmaan - arrintaas oo uu isagu beeniyay.
Lahaanshaha sawirka POMED
Image caption Jamaal Khaashuqji wuxuu ahaa wariye caan ah oo dhaleeceeya dowladda Sacuudiga
Wakiilka gaarka ah ee ay Qaramada Midoobay u xil-saartay baaritaanka dhacdadaas ayaa sheegtay in Khaashuqji "uu noqday nin lagu fuliyay dil ula kac ah oo lasii qorsheeyay, oo ah dil caddaaladda aan loo marin oo ay mas'uul ka tahay dowladda Sacuudiga".
Madaxda Sacuudiga ayaa dilka Khaashuqji ku tilmaamay fal ay fuliyeen "shakhsiyaad ku dhaqaaqay howlgal aan loo dirsanin".
Bayaan ay dacwad oogeyaasha Istanbul kasoo saareen maanta oo Arbaco ah ayaa lagu sheegay in Axmed Casiiri iyo Saud al-Qahtani lagu soo oogay dacwad ku saabsan "abaabulka dilka Khaashuqji, oo ay u diyaariyeen si ulakac ah".
Image caption Dilka Jamaal Khaashuqji ayaa laga hadal hayay guud ahaan warbaahinta caalamka
Warbixinta dacwad oogeyaasha 18-ka qof ee kale ku eedeysay inay gacantooda ku fuliyeen dilka - waxaana ka mid ah xubin ka mid ah ilaalada boqortooyada Sacuudiga, khabiir ku xeel dambi baarista iyo sarkaal ka tirsan sirdoonka Sacuudiga, kuwaasoo dhammaan horay ula safray Dhaxal-Suge Maxamed Bin Salmaan.
Image caption Su'aalo ayaa ka taagan waxa ka dhex dhacay qunsuliyadda Sucuudiga 2-dii bishii Oktoobar